Stylist တစ်ယောက်မှာ မဖြစ်မနေ ရှိရမယ့် အရည်အချင်း (၅)ရပ် - For her Myanmar
Stylist တစ်ယောက်ဖြစ်လာဖို့ဆိုတာ အတော်ကြီးကို မလွယ်တာပါနော်..
ယောင်းတို့ရေ … ဒီဘက်ခေတ်မှာ ဖက်ရှင်ရဲ့ အခန်းကဏ္ဍ တွင်ကျယ်လာတာနဲ့အမျှ Stylist တွေလည်း များပြားလာတာတွေ့ရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ခပ်မိုက်မိုက် stylist အလုပ်က မြင်နေတွေ့နေရသလောက် လွယ်ကူရဲ့လား ? မထင်ပါနဲ့နော် … Stylist တစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ ဒီလိုအရည်အချင်းတွေ ရှိနေဖို့လိုအပ်ပါတယ် …
အလုပ်အများကြီးကို ပြိုင်တူ လုပ်နိုင်စွမ်း (Multi-tasking)
ဒီအလုပ်က အင်မတန်မှ ခေါင်းစားတဲ့အပြင် လက်တွေ့ကျကျလည်း တွေးခေါ်ရတယ်။ တီထွင်ဉာဏ်လည်း အပြည့်ရှိရတယ်။ Stylist တစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ အနုပညာမျက်စိရှိဖို့လည်းလိုသလို မြန်မြန်ဆန်ဆန် အလုပ်လုပ်တတ်ဖို့လည်း လိုပါသေးတယ်။
အလိုက်သင့် ပြောင်းလဲနိုင်စွမ်း (Adaptability)
ပွဲအချိန်နီးခါမှ ဖိနပ်တွေပြောင်းချင်လို့ဆိုပြီး အရပ်ကူပါ၊ လူဝိုင်းပါဖြစ်လာရင် ချက်ချင်းဆို ချက်ချင်း လဲပေးနိုင်ရတယ်။ အခုချက်ချင်းလာမှဖြစ်မယ်ဆိုလို့ ဝုန်းဒိုင်းကြဲပြီး ထသွားရတဲ့ အဖြစ်တွေဆိုတာ ခဏခဏပါပဲ။ ဒီအချက်တွေကို အပြုံးမပျက်ခံနိုင်ရည်ရှိရမှာကလည်း stylist တွေပါပဲနော်..
စနစ်တကျ ရှိမှု (Organization)
အဝတ်အစားတွေ၊ အဆင်တန်ဆာတွေကို အသေးစိတ်လေးကအစ ဂရုစိုက်ရတဲ့အပြင် စာရွက်စာတမ်းကိစ္စတွေလည်း လိုက်မလုပ်ရဘူး မထင်လိုက်ပါနဲ့။ ဒါတွေကို စနစ်တကျလုပ်တတ်ဖို့ကလည်း Stylist တစ်ယောက်မှာ ရှိသင့်ရှိထိုက်တဲ့ အရည်အချင်းတစ်ခုပါ။
Stylist တွေမှာလည်း personality (ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး) ကောင်းကောင်းရှိဖို့လိုပါတယ်။ လူတွေကို အဝတ်အစား လှလှပပဆင်ပေးပြီး ပျော်ရွှင်အောင်လုပ်ပေးနိုင်တာက Stylist တစ်ယောက်ရဲ့ စွမ်းအားပါ။ လူတိုင်းနဲ့ ပေါင်းတတ်သင်းတတ်ပြီး အဆင်ပြေအောင် နေတတ်ဖို့ကလည်း အရေးကြီးပါတယ်။
အလုပ်ကြိုးစားခြင်း (Hard working)
Stylist လုပ်ရတာ စိတ်ကောလူကော ပင်ပန်းပါတယ်။ လူအများစုထင်တာက လှလှပပကျော့ကျော့မော့မော့လေးပဲ နေရတယ်ပေါ့။ အမယ်လေး … မှားမယ် မှားမယ်။ ဈေးဝယ်တာကအစ တောက်တိုမယ်ရအဆုံး ကိုယ်မပါရင် မပြီးချေဘူး။ အထုပ်ကြီးအထုပ်ငယ်ကို ကိုယ်တိုင်ဆွဲပြီး တစ်နေရာကနေ တစ်နေရာကူးချည်သန်းချည်လည်း လုပ်ရသေးတာကြောင့် Stylist တွေက အလုပ်ကြိုးစားဆုံးသူတွေပါ။
ကဲ … ဒါတွေကတော့ stylist တစ်ယောက်ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင် မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ အခြေခံအရည်အချင်းတွေပါ။
Stylist ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုတဲ့ ယောင်းတို့ရေ… ဒီအချက်တွေ ပိုင်ဆိုင်နေကြပြီလား?
<<< Unicod >>>
Stylist တဈယောကျဖွဈလာဖို့ဆိုတာ အတျောကွီးကို မလှယျတာပါနျော..
ယောငျးတို့ရေ … ဒီဘကျခတျေမှာ ဖကျရှငျရဲ့ အခနျးကဏ်ဍ တှငျကယျြလာတာနဲ့အမြှ Stylist တှလေညျး မြားပွားလာတာတှရေ့ပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ ခပျမိုကျမိုကျ stylist အလုပျက မွငျနတှေနေ့ရေသလောကျ လှယျကူရဲ့လား ? မထငျပါနဲ့နျော … Stylist တဈယောကျဖွဈဖို့ ဒီလိုအရညျအခငျြးတှေ ရှိနဖေို့လိုအပျပါတယျ …
အလုပျအမြားကွီးကို ပွိုငျတူ လုပျနိုငျစှမျး (Multi-tasking)
ဒီအလုပျက အငျမတနျမှ ခေါငျးစားတဲ့အပွငျ လကျတှကေ့ကြလြညျး တှေးချေါရတယျ။ တီထှငျဉာဏျလညျး အပွညျ့ရှိရတယျ။ Stylist တဈယောကျဖွဈဖို့ အနုပညာမကျြစိရှိဖို့လညျးလိုသလို မွနျမွနျဆနျဆနျ အလုပျလုပျတတျဖို့လညျး လိုပါသေးတယျ။
အလိုကျသငျ့ ပွောငျးလဲနိုငျစှမျး (Adaptability)
ပှဲအခြိနျနီးခါမှ ဖိနပျတှပွေောငျးခငျြလို့ဆိုပွီး အရပျကူပါ၊ လူဝိုငျးပါဖွဈလာရငျ ခကျြခငျြးဆို ခကျြခငျြး လဲပေးနိုငျရတယျ။ အခုခကျြခငျြးလာမှဖွဈမယျဆိုလို့ ဝုနျးဒိုငျးကွဲပွီး ထသှားရတဲ့ အဖွဈတှဆေိုတာ ခဏခဏပါပဲ။ ဒီအခကျြတှကေို အပွုံးမပကျြခံနိုငျရညျရှိရမှာကလညျး stylist တှပေါပဲနျော..
စနဈတကြ ရှိမှု (Organization)
အဝတျအစားတှေ၊ အဆငျတနျဆာတှကေို အသေးစိတျလေးကအစ ဂရုစိုကျရတဲ့အပွငျ စာရှကျစာတမျးကိစ်စတှလေညျး လိုကျမလုပျရဘူး မထငျလိုကျပါနဲ့။ ဒါတှကေို စနဈတကလြုပျတတျဖို့ကလညျး Stylist တဈယောကျမှာ ရှိသငျ့ရှိထိုကျတဲ့ အရညျအခငျြးတဈခုပါ။
Stylist တှမှောလညျး personality (ကိုယျရညျကိုယျသှေး) ကောငျးကောငျးရှိဖို့လိုပါတယျ။ လူတှကေို အဝတျအစား လှလှပပဆငျပေးပွီး ပြျောရှငျအောငျလုပျပေးနိုငျတာက Stylist တဈယောကျရဲ့ စှမျးအားပါ။ လူတိုငျးနဲ့ ပေါငျးတတျသငျးတတျပွီး အဆငျပွအေောငျ နတေတျဖို့ကလညျး အရေးကွီးပါတယျ။
အလုပျကွိုးစားခွငျး (Hard working)
Stylist လုပျရတာ စိတျကောလူကော ပငျပနျးပါတယျ။ လူအမြားစုထငျတာက လှလှပပကြော့ကြော့မော့မော့လေးပဲ နရေတယျပေါ့။ အမယျလေး … မှားမယျ မှားမယျ။ ဈေးဝယျတာကအစ တောကျတိုမယျရအဆုံး ကိုယျမပါရငျ မပွီးခဘြေူး။ အထုပျကွီးအထုပျငယျကို ကိုယျတိုငျဆှဲပွီး တဈနရောကနေ တဈနရောကူးခညျြသနျးခညျြလညျး လုပျရသေးတာကွောငျ့ Stylist တှကေ အလုပျကွိုးစားဆုံးသူတှပေါ။
ကဲ … ဒါတှကေတော့ stylist တဈယောကျဖွဈခငျြတယျဆိုရငျ မရှိမဖွဈလိုအပျတဲ့ အခွခေံအရညျအခငျြးတှပေါ။
Stylist ဖွဈခငျြတယျဆိုတဲ့ ယောငျးတို့ရေ… ဒီအခကျြတှေ ပိုငျဆိုငျနကွေပွီလား?
Tags: business, Career, clothing, Fashion, Job, styling, stylist, tips, work